Ireo olona izay mijery tsara ny lanjany dia manatona tsara ny safidin'ny sakafo. Amin'io tranga io dia maro no mandà tsy hihinana sakafo kalorie, na dia misy aza ny tranga. Ohatra, ny tsimoka noho ny toetra mahasoa azy ireo, na dia eo aza ny lanjan'ny herinaratra avo lenta, dia miteraka fahavoazana.
Prunes - toetra mahasoa sy fanoherana
Mba hahazoana ny vokatra tiany, dia ampy ny mihinana afa-tsy 4 isa. Ho an'ny tsimokaretina fako dia ilaina izany:
Izy io dia manana fahafahana mifehy ny haavon'ny siramamy ao amin'ny ra, izay mitazona ny metabolika amin'ny ankapobeny. Angamba izany dia vokatry ny lisitra glycemika ambany.
Mampihena ny fiakaran'ny kolesterola "ratsy", izay mahatonga ny fahavoan'ny fahavoazana.
Tsy misy sira mifono sira, izay miteraka mivantana ny fiterahana.
Tsy misy sira izany, izay mitahiry rano ary mitombo ny tsindry. Noho izany, dia soloina ny hanolo ny sakafo mahavelona anao sy ny hafaingan-tsakafo hafa miaraka amin'ny tsimoka.
Tena vokatra mahafa-po izany, noho izany dia tokony hampiasaina aloha ny mofomamy mialoha ny sakafo mba hialana amin'ny hanoanana. Angamba izany noho ny fisian'ny fibre, izay mameno ny vavony, ary manadio ny tsinainy amin'ny vokatry ny fatiantoka. Ny prunes dia manampy amin'ny fanesorana ny fihenam-bidy.
Ny fananan'olon-tsakafo ho an'ny vehivavy mandritra ny fahaverezan'ny fahavoazana dia ny maha-mpanohitra azy koa. Mandritra ny sakafo dia maro no mijaly noho ny fikorontanana, ny tsy fahitan-tory ary ny fahaketrahana. Manampy amin'ny fiatrehana io olana io ny plastika maina.
Ny firafitry ny prunes dia ahitana karazan-tsakafo marobe izay ilaina ho an'ny fiasa ara-dalàna ny vatana.
Sakafo miaraka amin'ny prunes
Misy safidy maromaro amin'ny fahaverezan'ny lanjany amin'ny fampiasana tsiro maina. Azonao atao, ohatra, ny manolo ny sakafo maraina miaraka amin'ny ampahany amin'ny yogourt sy prunes. Ny tsara indrindra dia ny manao ny cocktail mifototra amin'ireo vokatra ireo.
Manaova fofona amin'ny blender ary mampifandray amin'ny kefir. Ny zava-pisotro toy izany dia hanampy amin'ny fanadiovana ny tsinay sy ny fanesorana pounds fanampiny.
Ny vehivavy izay tia zava-mamy dia liana amin'ny fisoloana siramamy amin'ny sakafo, amin'ity tranga ity dia ny voka-tsoa no vahaolana tsara indrindra. Azonao fofona tsotra fotsiny ilay volon-koditra maina ary ampio amin'ny tsindrin-tsakafo samihafa.
Mangatsiatsiaka amin'ny sakafo fanadiovana
Misy karazany iray, izay tokony hampiasaina indraindray mba hanadiovana ny tsinontsinona avy amin'ny vokatry ny fatiantoka.
aviavy maina - 100 g;
voankazo maina - 100 g;
Voankazo maina, miora, noho izany dia afaka mampiasa mofomamy na blender ianao. Ny zana-kisoa dia mangatsiaka amin'ny rano 1 litatra mandritra ny 3 ora, ary ampidiro ao anaty voankazo maina mandritra ny 5 ora ny fofona ary alao ny hafanana ao anaty vata fampangatsiahana. Mila mampiasa azy 1 tbsp. tsatokaty alohan'ny sakafo.
Misy ihany koa ny karazan-tsakafo ara-tsakafo izay tsy mahafa-po ny faniriana hihinana zava-mamy mandritra ny fihinana, fa mamela ny vatana amin'ny zavatra ilaina koa.
tantely - 1 tsp.
Ampiasao ny menaka sy moka, sokafy ireo voanjo sy tsimoka, ary aforeto amin'ny tantely izy ireo avy eo. Ho an'ny fahasamihafana isan-karazany dia afaka mampiasa voanjo tena hafa ianao ary manampy ireo voankazo maina. Vonona hampiasa 1 tbsp. Soso-tsakafo toy ny sakafao mba hialana amin'ny hanoanana.
Afaka manao zava-pisotro koa ianao mba handrarahana sy hanadiovana ny tsinay.
Alika rose - 50 g;
buckthorn bark - 2 tbsp. lovia kely.
Makà vilany mialà ao anaty rano, alao ambolena sy kisoa, ento amboara ary andao ho 20 minitra. Avy eo dia alefaso any ny alika ary asio 35 minitra hafa. Aorian'io fotoana io, avelao ny zava-pisotro mahamay ary tohano izany. Ampiasao izany mandritra ny ora roa alohan'ny hatoriana hatramin'ny 100 g.
Vitamina amin'ny selenium
Kefir - votoatin'ny kaloria
"Maria" cookies - votoatin'ny kaloria
Noho ny fisoloana ny hena?
Honey in combs - tsara sy ratsy
Kaloria of blue whiting
Manimba an'i Anita Lutsenko
Ny vokatra ilaina indrindra eto amin'izao tontolo izao
Sakafo maitso - tsara sy ratsy
Bibikely ho an'ny fahavoazana
Fanazaran-tena isometrika momba ny fahaverezan'ny lanjany ao an-trano
Sakadia - tsara sy ratsy
Ireo vokatra manampy amin'ny fihenam-bidy
6 toe-javatra mampidi-doza tsy ampoizina fa maro ny mpampiasa Instagram tsy mahalala
David Beckham dia nanamavo ny mpandray anjara tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny famaliana ny antso
Fomba hanesorana ny fofona avy amin'ny vata fampangatsiahana - famonoana vahoaka
Vitamina ho an'ny angovo
Selerina manimba salady
Amin'ny firy no tsara kokoa ny manapaka volo?
Aretin-koditra mahatsiravina - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Sarafana ho an'ny vehivavy matavy - ireo modely tsara tarehy sy tsara tarehy
Toby fisakafoana boribory misy tongotra iray
Ahoana no hisafidianana ireo lamba hidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny?
Ahoana no tokony ho bevohoka aorian'ny fadimbolana?
Iza ny anaran'i Yaroslav
Inona ny nofy nofinofy?
Mirona sarimihetsika mahaleo tena